Donut | Colourful Recipes
Bread flour ( Whole Wheat Flour ) – 1 cup
Butter – 1 stick ( 1/2 cup )
Vanilla accent – 1 tsp
တထုပ်ကို7g ရှိတယ် …
Yeast အမှုန့်ကို ဖောက်ထုပ်ပီး
ခပ်နွေးနွေးလေး အပူရှိတဲ့ နွားနို့ ထမင်းစားဇွန်း ( ၅ ) ဇွန်း
သကြား ၁ ဇွန်း နဲ့
Yeast အမှုန့် ပျော်နေအောင် အသင့် ဖျော်ထားပါ …
ဂျုံမှုန့် နှစ်မျိုးကို အရင်ရောထားပါ။
ကြက်ဥ ၂ လုံးကို ခေါက်ထားပါ။
Yeast အမှုန့် ဖျော်ထားသော cup
ဂျုံမှုန့် ၂ မျိုးကို နှံစပ်နေအောင် အရင် မွှေထားပီးမှ …
အသင့်ဖျော်ထားသော yeast ခွက်ကို လောင်းထည့် … ( လက်တဖက်က နှယ်နေပေးပါ ) ( စက်နဲ့ နှယ်လည်း ရတာပါပဲ )
vanilla accent ထည့်
ထောပတ် 1 stick = 1/2 cup ကို မီးမြေးမြေး နဲ့ ထောပတ်ရည် ဖျော်ထားတာ လောင်းထည့်ပီး လက်ဖနောင့်နဲ့ ဖိနှယ်ပေးရင် မုန့်သား ညက်လာပါလိမ့်မယ် ….
( အဲဒီမှာ တခုပြောပြချင်တာက … ကိုယ့် dough nut ကို ပေါင်မုန့် ဂျုံသား အရသာမျိုး ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ပေါင်မုန့် ဂျုံ ရောစပ်ထားတာပါ ။ ဂျုံ နူးနူးညံညံ ကို ပိုကြိုက်နှစ်သက်သူက ပေါင်မုန့် ဂျုံ မထည့်ပဲ … all purpose flour နဲ့ မုန့်သားနှယ်လို့ ရပါတယ် … ဒါဆိုရင် အဖြူရောင် မုန့်သားကို ရရှိမှာပါ .. အခုကတော့ ပေါင်မုန့်လိုမျိုး အညိုရောင် မုန့်သား )
ပလပ်စတစ်နဲ့ ကြွေဇလုံကို ပိတ်ပီး … နွေးသော နေရာမှာ ၁ နာရီ ( သို့မဟုတ် ) ၂ နာရီ ထားပေးထားပါ …
အိမ်မှာတော့ oven ထဲ ထည့်လိုက်တယ် … oven နံပါတ်က 200ºF ကနေ စပါတယ် …
ပလပ်စတစ် လုံနေအောင် ပိတ်ထားတဲ့ ကြွေဇလုံကို oven ထဲ ထည့် .. oven ခလုပ် စဖွင့်တဲ့ နေရာမှာပဲ ထားလိုက်တယ် .. အဲဒါဆို 160 ºF လောက် အပူရှိန် ရှိတယ်။ …
oven နံပါတ် 200ºF နား ထိ မရောက်ပါဘူး …
ရာသီဥတုက ပူတယ်ဆိုရင် အပြင်မှာ ထားတာ ကောင်းပါတယ် …
oven 160ºF တနာရီ လောက်ထည့်ထားလိုက်ရင် …
( သို့မဟုတ် )
ပူနွေးသော နေရာမှာ ၁ နာရီလောက် ထားပါ။
Yeast ( ပွဆေး ) နဲ့ ဂျုံကို နှယ်ပီး
လေလုံ ပလတ်စတစ် ဖြစ်ဖြစ် .. အ၀တ်စိုနဲ့ အုပ်ပေးထားပီး
၁ နာရီ ( သို့) ၂ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင် …
ပူနွေးသော နေရာမှာ ထားရင် …
Yeast တန်ခိုးနဲ့ ဂျုံတွေက ၂ ဆ လောက် ပွတက်လာပါလိမ့်မယ် …
စားပွဲပေါ်မှာ ဂျုံမှုန့်ကို ဖြူး …
ကြွေဇလုံ ကို မောက်ချ …
ဂျုံကို ၂ မိနစ် မှ ၅ မိနစ်လောက် နှယ်ပီးတာနဲ့ အပြား ဖြစ်အောင် ဒလိမ့်တုံးနဲ့ လိမ့် …
ဂျုံပြားကို လက် တဆစ်လောက် အထူ ဆို ပိုကောင်းပါတယ် …
( လက်ဆစ် ကြီးတဲ့လူဆိုရင်တော့ လက်တဆစ်ရဲ့ တ၀က်ပေါ့ )
cookie cutter အ၀ိုင်းကြီး ၁ ခု နဲ့ အ၀ိုင်းသေး ၁ ခု ယူပီး ဖြတ် …
အိမ်မှာ အသေး cookie cutter ပဲ ရှိလို့ … အကြီးအတွက် ဖန်ခွက်ကို သုံးလိုက်တယ် …
ဖန်သားနဲ့ ဖြတ်ရတာ ဆိုတော့ ဖြတ်ရင်းနဲ့ ဖန်ခွက်ကို လှည့်ပေးမှ ဂျုံ က ပြတ်တယ် …
ဒိုးနတ် မုန့်သား ဖြတ်ထားတာတွေ …
ကျန်နေတဲ့ ဂျုံသားတွေကို စားပွဲပေါ် ဂျုံမှုန့် အနည်းငယ်ဖြူးပီး ဂျုံသားနှယ် …
ဒလိမ့်တုံးနဲ့ အပြား လုပ်
cutter နဲ့ ဖြတ် …
( E.T )
cookie ဖုတ်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ paper ပေါ်ကို ဖြတ်ပီးသား ဂျုံ ၀ိုင်းတွေ တင် …
oven ထဲ ထည့် … မိနစ် ၃၀ လောက် …. oven ခလုပ် ဖွင့်ကာစပဲ ( 160º F သာသာ လောက်ပဲ ထားပါ )
oven – 160ºF – 30 Minutes
အိမ်က နွေးနွေး ဆိုရင်တော့ အပြင်မှာပဲ အ၀တ် ဖြစ်ဖြစ် အုပ်ပီး မိနစ် ၃၀ လောက် ထားပီးမှ ဆီနှစ်ပီး ကြော်ပါ ….
နောက်ဆုံး လက်ကျန် ဂျုံသားတွေကို ဂျုံချောင်း တချောင်း လုပ်လိုက်ပီး … ဟိုဘက် ဒီဘက် တပြိုင်တည်း လိမ်လိုက်တယ် ..
( မျက်စိမှာ ပုံဖော်မြင်အောင်ဆိုရင် စောင်တထည်ကို လူ ၂ယောက် ဟိုဘက် ဒီဘက် တပြိုင်တည်း ရေညစ် နေသလိုမျိုး )
morning buns ကို ဒီလိုပုံစံမျိုး လုပ်ပီး အပေါ်ကနေ နှမ်းဖြူးပီး ပေါင်မုန့် ဖုတ်လို့လည်း ရပါတယ် …
အလွယ်တကူ ဒီ ချောကလက်ရည်ပဲ သုံးလိုက်တယ် …
အစိမ်းရောင် အတွက်က …
ထောပတ် အရည် .. သကြားပေါင်ဒါမှုန့် … အစိမ်းရောင် ဆိုးဆေး
( အနီရောင်ဆိုးဆေး၊ ခရမ်းရောင်ဆိုးဆေး၊ ပန်းရောင်ဆိုးဆေး )
( ခပ်ပြစ်ပြစ် ) လေးဖျော်ပီး
ဖျော်ထားတဲ့ ပန်းကန်ထဲ ဒိုးနတ် မုန့် အ၀ိုင်းကို ထည့်ပီး ပြန်ယူလိုက်တာနဲ့ ချောကလက် အရည် သုပ်ပီးသွားပါပီ ..
အပေါ်ကနေ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အလှဆင် ချောကလက်ဆန်လေးတွေ ထပ်ထည့်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ …
အိမ်မှာ မီးဖို ကွိုင် နံပါတ် ၄ ( မီးဖိုမီးခလုတ် – နံပါတ် ၄ ) နဲ့ ဆီနှစ်ပီး ကြော်ပါ …
ပေါင်မုန့် ဂျုံသားမို့ မုန့်သားက ဆီထဲ နှစ်ပီး ကြော်လိုက်တာနဲ့ မုန့်သား ခပ်မြန်မြန် တက်ပါတယ် …
တုတ်ချောင်း အရှည်နဲ့ ကြော်တာ ပိုကောင်းတယ် …
ကြော်ပီးသား ဒိုးနတ် မုန့်များ
မုန့်သား ပွလည်း ပွတယ် … ပေါင်မုန့် ဂျုံမှုန့် ထည့်ပီး … သကြားလည်းပါတာမို့ စားလို့ကောင်းပါတယ်
ချောကလက် ကြိုက်နှစ်သက်သော မိသားစုမို့ ချောကလက်ရည် စိမ်ထားတဲ့ ဒိုးနတ်မုန့်က ပိုစားကောင်းပါတယ် …
မိနစ် ၃၀ လောက် ထားလိုက်ရင် ချောကလက် အရည်တွေက ခဲပီး ပြောင် ပြောင် လက် လက် လေး ဖြစ်လာလိမ့်မယ် …
ရိုးရိုး ဒိုးနတ်၊ ချောကလက် ဒိုးနတ် နှင့် အစိမ်းရောင် ဒိုးနတ်
ဒါက သကြားအမှုန့် ကပ်ထားတာ …
သကြားအမှုန့် ( sugar powder ) ပန်းကန်ထဲကို ဒိုးနတ်မုန့် ကျပီး မှိုတက်နေသော မျက်နှာနဲ့ ပြန်ထွက်လာသလိုမျိုး …
ချောကလက်မှိုတက် ဒိုးနတ်မုန့် …
S ပုံစံ ဒိုးနတ်မုန့်
Whole wheat yeast bread :
By Thet Nandar • Posted in Donut	• Tagged ဒိုးနတ်, ချောကလက်ဒိုးနတ်, bread flour, breakfast, chocolate donut, colourful recipes blog, cup sugar, food, purpose flour, whole wheat flour